ထုတ်လုပ်မှု ဦး ဆောင်မှု
သင်၏ဂိမ်း၏အကြောင်းအရာကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်နယ်ပယ်အချို့ကိုဖြည့်ခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၁၂ ခုမှသင်၏ဉာဏ်စမ်းပဟေofိစကား၏ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ drag and drop interface သည်သင်၏ဉာဏ်စမ်းပဟေquိများ (ခလုတ်များ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများ) ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုရွှေ့ပြောင်းရန် (သို့) စာလုံးအရွယ်အစားကိုပြောင်းရန်လွယ်ကူစေသည်။ ခလုတ်တစ်ခုစီ၏အရောင်နှင့်၎င်း၏တံဆိပ်ကိုလည်းပြောင်းနိုင်သည်။
သင်၏ဉာဏ်စမ်းပဟေforိများအတွက်အခင်းအကျင်းများစွာရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်နှစ်သက်သောအရာကိုသာရွေးချယ်ပါ။ သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးပါ။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့မဟုတ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်သောအမျိုးအစား ၁၇ ခုတွင်ဉာဏ်စမ်းပဟေ90ိပေါင်း ၉၀ ကျော်ရှိသည်။
သင်၏ဉာဏ်စမ်းပဟေquိများကိုသင်၏ Shopify ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပါ
သင်၏ဂိမ်းကိုသင်၏ Wix ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ထည့်ပါ
သင်၏ဉာဏ်စမ်းပဟေizိများကိုသင်၏ BigCommerce ဆိုင်တွင်ထည့်သွင်းပါ
ဘာသာစကား EnglishFrançaisEspañolDeutschРусскийالعربيةעבריתελληνικάPortuguês中国ItalianoNederlandsTiếng ViệtDansk한국어Melayuไทย日本語TürkçePolskieMagyarČeskýNorskBahasa Indonesiaខ្មែរУкраїнськийSvenskaбългарскиEestiHrvatskiLietuviųFilipinoSlovakRumunskiSuomiÍslenskuहिंदीLatviešuCatalàEuskalSrpskiBosanskiNorsk (Bokmål)հայերենລາວSlovenščinaAfrikaans普通話LatineБеларусCorsuCymraegEsperantoفارسیGaeilgeGàidhlig na h-AlbaGalegoKreyòl AyisyenBasa JawaქართულიҚазақKurdîLëtzebuergeschMaoriМакедонскиМонголMaltiဗမာनेपालीਪੰਜਾਬੀپښتوSamoaSoomaaliUrang SundaKiswahiliதமிழ்اردوO'zbekייִדישzuluአማርኛAzərbaycanবাঙালিFryskગુજરાતીHausaNdi Igboಕನ್ನಡКыргызчаMalagasyമലയാളംमराठीChichewaSesothoShonaسنڌيසිංහලТочикతెలుగుisiXhosaYoruba
© 2001–2021 All Rights Reserved ။ Fyrebox®သည် Melvia Pty Ltd. ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ABN: 411 592 958 24. Terms. Privacy. GPDR.